Anyị enwere ike Biko Getna-eme nke ọma n’ahịa onwe anyị? | Martech Zone
Saturday, October 1, 2016 Douglas Karr
a onyinye spoof video dị egwu. Egwuregwu kachasị mma na-adịkarị na-esite n'eziokwu, na ntinye onyinye na-abụ ihe ọchị. Adịghị m poo-pooing enọ kpam kpam; Ekwenyere m na mmata ụlọ ọrụ dị oke mkpa. Ọ na-enye ihe akaebe nke ikike gị ma na-ewulite mmata nye ndị na-ege ntị dị oke mkpa.
Anyị nwere ihe dị egwu ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na anyị na-arụ ọrụ. Ha nwere ha aka ha zuru anyị, pushing anyị ngwaahịa (akwụkwọ a) dị ka akụ, anyị ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ dị ka onye ndú, Jenn dị ka a ahịa MC na ọkà okwu, na onwe m dika onye onye na-eche echiche ire ahia, onye na-ekwu okwu ahịa na onye na-ekwu okwu ahịa. Ihe dị mkpa gbasara ndị be anyị bụ na ha na-akpagide anyị ka anyị nwee ọdịiche. nkwalite onwe onye na-adịghị eme ihere. Ug.
Ndo maka eriri na-agwụ ike nke nkwalite nkwado onwe onye na-eme ihere. Abụkwa m onye ikpe mara.
Amachaghị m ebe edoghi anya n’etiti ego na ntụkwasị obi onwe onye, ​​mana ọ dịghị mfe. N'etiti ọmụmụ ihe ọmụmụ mkpọ ebe ị họrọ naanị nsonaazụ kacha mma ị rụpụtara, na nchịkọta nke buzzwords, na nchọpụta ọmụmụ mkpọ - ọ na-eru uju. Ugbu a amatara m ihe ọ dị ka ide okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nzaghachi RFP, na mbipụta akụkọ maka ibi ndụ.
Taa, m bupụrụ akpa schwag m na ọgbakọ - chaja ekwentị, nnyapade ekwentị nkwụnye, USB isi mkpịsị aka mbanye, moleskins, post-it note pad, na onye ọzọ biya kalama. Jonathan Green, onye edemede nke Akwụkwọ bụ Green's Dictionary nke Slang, chụrụ azụ okwu ahụ swagwag, ị gaghị ekwenye na mmalite nke okwu ahụ:
A na-akpọ wii wii ndị dị ala ditchweed, schwag, na skunkweed.
Echere m mgbe niile schwag bụ ụda akpa nke ihe nzuzu mere mgbe ọ kụrụ ụlọ mkpofu ụlọ nkwari akụ gị. Ma ọ dịghị. O ka njo karie… nke ya na irere ihe nzuzu. Azụtụbeghị m ite, mana enwere m ike iche n'echiche otu esi arụ ọrụ ọ ga-abụ. Ppyre ahịa Crappy ga-aka njọ.
Anyị ga na-ere onwe anyị, mana anyị ekwesịghị ịme ya dị ka ndị ọzọ.
Nke a bụ ihe m chere banyere ka m na-elegharị anya na ụlọ ọrụ anyị:
Eziokwu ahụ bụ na anyị ga - eme ya anaghị egbochi anyị ịbụ onye mbụ, n'agbanyeghị. Maka ọdịmma Chukwu, ndị be anyị, ka anyị tinye ụfọdụ echiche n’ahịa anyị. Ọ dị iche n’etiti ndị ọgbọ gị, kwụsịkwa i tryingomi ha.
Ọ dị mma, nke a bụ mgbe ị ga-akpọrọ m gaa n'obodo maka ahịa ahịa m. 😉
Tags: onyinye ngosienọakpọ onwe gịegoahụrụ m onwe m n'anyaerere onwe gị